२९ वर्षको राजनीतिक करिअरमा मैले राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र दुबैसँग काम गर्ने अवसर पाए। आज १९ जेठ, राजा वीरेन्द्रको सपरिवार हत्या भएको दिन। म उहाँलाई सच्चा देशभक्त र राष्ट्रभक्त राजाको रूपमा स्मरण गर्छु।
आज लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयलाई लिएर भारतले जुन किसिमको दाबी गरिरहेको छ र दुबै देशको सदियौंदेखिको सम्बन्धमा तिक्तता आएकाे छ, यो अवस्थामा म राजा वीरेन्द्रलाई झनै बढी स्मरण गरिरहेको छु।
उहाँ जीवित भइदिएको भए नेपाल–भारत सम्बन्ध यो अवस्थामा आइपुग्ने थिएन। नेपालमा राजसंस्था मासेर दिल्लीमा १२ बुँदे गर्दै सत्तामा पुगेका अहिलेका राजनीतिक दल र नेताहरूको यो हविगत हुनु नै थियो। यो त 'ट्रेलर' मात्र हो, अझै थुप्रै खेल हेर्न बाँकी छ।
राजा वीरेन्द्रको एउटा स्वभाव थियो- आफ्नf पिता राजा महेन्द्रभन्दा विल्कुल फरक। राजा महेन्द्र कुनै विषयमा निर्णय गर्दा आफूसँग नजिक रहेका ४–५ जना विशेष व्यक्तिसँग सल्लाह लिन्थे। सबैको कुरा मिहीन ढंगले बुझ्ने प्रयास गर्थे र अन्त्यमा निर्णय आफै गर्थे।
राजा वीरेन्द्रको कार्यकालमा दुईवटा प्रमुख राजनीतिक उथलपुथल भयो। पहिलो २०३६ र दोस्रो २०४६ साल। उहाँ प्रजातन्त्रप्रेमी हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराको द्याेतक यो पनि हो- २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था बनिसकेको थिएन। यद्यपि विधार्थी आन्दोलन भइरहेको थियो। तर, जनमतसंग्रह घोषणा गरिहाल्नुपर्ने नै अवस्था बनेको थिएन। तर, वीरेन्द्रले कसैसँग सल्लाह नगरीआफ्नो स्वविवेकले जनमतसंग्रहको घोषणा गरे।
जनमतसंग्रह सम्पन्न भएपछि एक दिन म राजा वीरेन्द्रलाई भेट्न गएको थिए। राजा वीरेन्द्रले गजबको कुरा गरिबक्स्याे, ‘हेर नवराज, जनमतसंग्रह गर्ने निर्णयमा पुगेपछि मैले यसको जानकारी बडामहारानी (ऐश्वर्या) लाई पनि दिइनँ। मैले कोहीसँग पनि सल्लाह लिइनँ। मेरो आफ्नै निर्णय हो।’
नभन्दै, भोलिपल्ट विश्वनाथजी पनि राजालाई बिफ्रिङ गर्न पुगे। यसपछि राजपरिषद् राख्ने निर्णय भएको थियो। दरबारको असन्तुष्टि के–के कुरामा थियो, त्यो सबै मलाई थाहा भएन। तर, ‘कम्युनिकेशन ग्याप’ चै ठूलो थियो। दरबारको असन्तुष्टिका कारण बहुदलवादी नेताहरू पनि आत्तिइसकेका थिए। तर, त्यो शान्तिपूर्ण ढंगले टर्‍यो।
तर, राजा वीरेन्द्र बहुदलीय व्यवस्थामा यति आस्थावान हुनुहुन्थ्याे । एकपल्ट मसँग भन्नुभएको थियाे, ‘हेर, अब हामी बहुदलमा गइसक्यौं। म संवैधानिक राजा भइसकेँ। म संवैधानिक राजाको दायराभन्दा एक इञ्च पनि बाहिर जादिनँ।’
राजा वीरेन्द्रको अर्को सबैभन्दा ठूलो विशेषता अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको ज्ञान हो। उनी मृदुभाषी त थिए नै, कसैलाई पनि एकछिन कुरा गरेपछि आफ्नो बृहत् ज्ञानले बशमा पार्ने क्षमता थियो।
उनीहरू टेन्टबाट निस्किएपछि उल्टै मलाई भन्न थाले–‘कहाँको ब्यारेक। हामीले त चिनेकै रहेनछाैं। यस्तो मान्छे, बाफरे बाफ ! यो त देशको विकासको निम्ति महिनौँ दिनसम्म टेन्टमा बसेको रहेछ। उनको आइडिया हेर्दा– उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा होस् वा सार्क क्षेत्रको विषयमा, यति धेरै ज्ञान भएको मान्छे त हामीले भेटेकै थिएनौं।’
राजा वीरेन्द्रको विषयमा यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। जो विदेशी भेट्न गयो, मख्ख परेर फर्किन्थ्यो। यस्तो राजालाई गुमाउँदा अहिले देशले ठूलाे घाटा व्यहाेरिरहेकाे छ। अस्वाभाविक निधन भएका उहाँप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्न चाहन्छु !
(सुवेदीसँग बिएल नेपाली सेवाका लागि नवीन अर्यालले लिएकाे अन्तर्वार्तामा आधारित )
प्रकाशित मिति: Jun 02, 2020 01:09:49